रोचक Archives - Page2of 51 - Bigul News
एशियाकै सबैभन्दा ठुलो ‘रेड लाइट एरिया’ जहाँ जन्मने बितिकैको बालिकाको यस्तो हुन्छ जिन्दगी
पुष ०७, २०७४ DS Bigul News
एजेन्सी, स्वर्ग र नर्क मरेपछि थाहा हुन्छ भन्ने गरिन्छ । नारी-पुरुष बराबर हुन । स्वतन्त्रता र हक-अधिकारको कुरा अहिले जताततै चलीरहेको अवस्थामा पनि यो धर्तीमा यस्तो पनि ठाउँ रहेको छ जुन …
धर्तीमा एलियन्स आउने पेन्टागनका पूर्व अधिकारीको यस्तो दाबी !
एजेन्सी, पेन्टागनको पूर्व अधिकारका अनुसार हाम्रो धर्तिको अलावा पनि दोस्रो ग्रहमा जीवनको अस्तित्व रहेको कुराको पर्याप्त प्रमाण रहेको बताएका छन्। र एलियन हाम्रो धर्तिमा आउने जाने गरी रहन्छन् । पेन्टागनको सीक्रेट यूएफओ-हन्टिंग ब्यूरोको …
बिना पैसा सम्भोग गर्न पाइने वेश्यालयको यस्तो छ रहस्य!
एजेन्सी, संसार बिचित्रको छ भने झैँ दुनियाँमा यस्तो पनि वेश्यालय रहेको छ जहाँ ग्राहकहरुसँग पैसा लिने गरिदैन । सुनेर अचम्म लाग्न सक्छ तर यो सत्य हो । वेश्यालयका वेश्याहरुको वारेमा हामीले …
यस रोबोटमाथि लाग्यो उत्पीडनको आरोप, घट्यो आश्चर्य लाग्दो घटना!
एजेन्सी, सन फ्रान्सिस्कोमा अवस्थित एक इलाकामा तैनाथ सुरक्षा रोबोट ‘के-9’ माथि घर नभएका मानिसहरुले उत्पीडनको आरोप लगाएका छन् । यस पश्चात रोबोटलाई उसको कामबाट बर्खास्त गरिदै त्यहाँबाट हटाईएको छ । आरोप अनुसार रोबोट …
पुष ०६, २०७४ SG BigulMedia
एजेन्सी, केहि युवतीहरु अर्थात् महिलाहरु कुनै पुरुषले नराम्रो दृष्टिकोणले जिस्किने, अश्लिल शब्द बोल्ने गर्यो भने चुपचाप सहेर बस्ने गर्छन भने केहि युवतीहरुले त्यसको प्रतिकार गर्ने गर्छन। त्यस्तै हालै ब्राजिलकी एक युवतीले पनि आफुलाई नराम्रो …
संसारकै सबैभन्दा महँगो सुपर-बाइकहरुको मुल्य यस्तो छ !
पुष ०६, २०७४ DS Bigul News
एजेन्सी, संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट बनाउने हुने अहिलेको शताब्दीमा होड-बाजी चलेको छ । सबै कुराको उत्कृष्ट भने झैँ बाइकहरु मध्ये पनि केहि सुपरबाईकहरु रहेका छन् जुन संसारकै उत्कृष्टको लिस्टमा परेका छन् । जसमध्ये टप …
यो हो संसारको सबैभन्दा खतरनाक सर्प, एकपटक मै जान्छ ज्यान!
एजेन्सी, सर्प भन्ने बित्तिकै सबैलाई डर लाग्न सक्छ त कसैलाई घिन । मानिसहरु झैँ सर्प पनि विभिन्न प्रकारको हुने गर्दछन् । जस्तै कुनै लामो, कुनै छोटो, कुनै कालो, कुनै सेतो, …
सगरमाथा भन्दा पनि लामो लम्बाई भएको यो विवाह पोशाकले राख्यो गिनीज बुकमा नाम!
एजेन्सी, मानिसहरु गिनीज वर्ल्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम लेखाउनको लागि दिन-प्रतिदिन नयाँ-नयाँ कार्य र अनौठो कलाहरु देखाउने गरेका छन् । यस्तै अब विवाहमा बेहुलीको पोशाकले पनि गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सफल भएको छ …
साउदीका यी युवराजले किने संसारकै सबैभन्दा महँगो घर, यस्तो छ घरको विशेषता!
पुष ०४, २०७४ DS Bigul News
एजेन्सी, साउदीको युवराज मोहम्मद बिन सलमानले संसारको सबैभन्दा महँगो घर किनेका छन् । हालैमा साउदीको राजकुमारले आफ्नो भाईहरु र परिवारको अन्य सदस्यलाई ‘भ्रष्टाचार विरोधी’ अभियानको तहत नजरबन्द गरेका थिए । …
यी गायिकालाई सरकारले दियो २ वर्षको जेल सजाय, यस्तो छ कारण!
एजेन्सी, कानुन बिपरितका कार्य अर्थात् अपराध गरे जेल गईने त सबैलाई थाहानै छ । तर गीत गाएर जेल गएको सुन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । इजिप्टमा एक पप गायिकालाई गीत गाउनु भारी …